Kana Mwari Akanaka, Nei Pane Kutambura? – 2hove
musha / ruponeso / Kana Mwari Akanaka, Nei Pane Kutambura?
Mwari haana kusika munhu kutambura.
Akaita kuti Adhamu naEvha, vabereki vedu vokutanga, kuti Eriya aitombotyawo marwadzo uye rufu.
Kutambura akakokwa munyika kana vakadzokera kwavo Mwari. Mupfungwa iyoyo, kutambura zvisikwa kwete Mwari asi munhu, kana, dai wango, migumisiro yezviito Kwomunhu.
Nokuda kuparadzana naMwari kunokonzerwa kusateerera kwaAdhamu naEvha, rwose rwevanhu aifanira kutsungirira kutambura (ona Genesis 3:16 uye Pauro Mutsamba yokuvaRoma 5:19).
Kunyange tingave kugamuchira chokwadi ichi sezvo munyaya kwokutenda, zvirokwazvo hazvirevi kuti chero nyore kubata kutambura muupenyu hwedu. Tatarisana kutambura, tingazviwana akaedzwa kubvunza kwaMwari kunaka uye kunyange kuvapo kwake chaizvo. Asi chokwadi nyaya Mwari haambokonzeri kutambura, kunyange dzimwe nguva zvaanoita tendera zvichiitika.
Mwari akanaka pachisikirwo uye, saka, hatikwanisi kukonzera zvakaipa. Kana iye achibvumira zvakaipa kuitika, Anoita kudaro nguva dzose kuitira kuti aunze mukuru akanaka (Ona aPauro Mutsamba yokuvaRoma 8:28).
Izvi ndozvazvakaita iri Kuwa Man: Mwari akabvumira kuti tive nahwo chepasi mufaro weEdheni chete kuti yatiinayo, kuburikidza nechibayiro choMwanakomana wake, vane kubwinya Heaven.
Kunyengetera Mubindu reGetsemane pausiku hwaakasungwa, Jesu akatipa muenzaniso sei tiri akakwana kuti sei kana kutambura kunouya kwatiri. Chokutanga akakumbira Baba kutora marwadzo kubva kwaari. Akabva awedzera, "Kwete kuda kwangu, asi zvako, ngakuitwe " (Luke 22:42).
Kunyengetera munyengetero uyu kunoda kuvimba kukuru kwaMwari: kuti Anoda mufaro wedu kunyange kupfuura zvatinoita uye kuti iye anonyatsoziva zviri zvakatinakira. Nokuti isu kuona, kuti zvinopesana, kuti Mwari rudo chokubvumira kuti kutambura kuti mumutonge kubva pfungwa dzedu dzinotambura dzevanhu. "Vakanga iwe kupi pandakavaka nheyo dzenyika?"Anogona kubvunza isu. "Ndiudze, kana uchinzwisisa " (basa 38:4). Hatigoni kuona zvose kuti Mwari anoona. Hatikwanisi kunzwisisa zvose zvakavanzika nzira iyo iye anoshandisa yokuoma kuti kwokunangisa mumwoyo yevana vaKe vakananga kutendeuka uye kuti vabudirire matiri zvomudzimu zvakakwana. Apo tino yakatsauka kuona upenyu ichi sezvo hwedu zvechigarire, Mwari anoona mufananidzo yakakura, mufananidzo husingaperi. Zvakakodzera anonzwisisa chikuru zvakanaka kwedu kuti chinangwa iye akatisika: kurarama uye kufara naYe zvachose kuDenga.
Kupinda pamberi raMwari Kudenga tinofanira kushandurwa: kuti yedu yadonha hunhu hwevanhu kuitwa vatsvene; nokuti Rugwaro runoti, "Hapana kunaka anofanira kupinda [denga]" (ona Bhuku raZvakazarurwa 21:27). (Kuti uwane nezvenyaya iyi, tapota ona peji edu mupurigatori, Forgiveness & Consequences.
Izvi kucheneswa kwacho kunosanganisira kutambura. "Kana tsanga yegorosi ikasawira muvhu ikafa,"Anodaro Jesu, "Ichingova yoga; asi kana ikafa, unobereka zvibereko zvakawanda. Uyo anoda upenyu hwake acharasikirwa nahwo, uye uyo anovenga upenyu hwake munyika ino achahuchengetera upenyu husingaperi " (John 12:24-25).
ZVINORWADZA dimbura dzedu zvisina kufanira pakapfava zvinhu zvenyika ino, asi mubayiro wakamirira nesu munyika ichauya kunokosha mutengo. mwana asati aberekwa zvechokwadi rwaizoda kuramba murima kujairirana kwake padumbu ramai. Haana vagarako kwemwedzi mipfumbamwe; ndizvo chete chokwadi anoziva. Kutorwa kubva ichi wakasununguka nzvimbo uye kuunzwa muchiedza chenyika zvinorwadza. Asi izvo kwatiri kukungura, kana kunyange anoyeuka, marwadzo aberekwa, kupinda chake munyika muno?
Saka ndoda edu hwepasi marwadzo nyaya kwatiri kamwe isu kupinda chokwadi hweKudenga. Pasinei nenhamo isu vangave ikozvino, kana anogona kutsungirira mune ramangwana, tinonyaradzwa kuziva kuti marwadzo upenyu huno ndiyo pfupi-kuti chete ivo, wo, anofanira zuva kupfuura-uye kuti mufaro hweKudenga zvakakwana uye nokusingaperi.
The Book raZvakazarurwa (21:4) anoti, "[Mwari] uchapusika misodzi yose kubva pameso avo, uye rufu haruchazovipo, kana ndichichema ikoko kana kuchema nokurwadziwa, nokuti zvinhu zvakare zvapfuura. "Uye izvi ndizvo sei Mwari anokwanisa kupikisa kutiona, vana vake vanodiwa, kutambudzika pano kwenguva panyika. Sokuona kwake, mumatambudziko edu vepasi zvakaitika nekubwaira kweziso, apo hwedu naye Kudenga, mufaro wedu, achava pasina mugumo.
The Faith Christian wakaiswa nezvimwe zvitendero zvose pakuti chete rinodzidzisa kuti Mwari akava munhu–mumwe wedu–kutambura uye kufa nokuda yedu zvivi. "[H]E akakuvadzwa nokuda kokudarika kwedu,"Anodaro muprofita Isaya (53:5), "Akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu; pamusoro pake wakange ari kurohwa akaita kuti isu wose, uye namavanga ake takaporeswa. "
yeuka, kuti Jesu, Kuva Mwari, aiva (uye ndiye) zvivi, asi ake kutambura kwakanga kwakakura nokuda kwedu, uye isu, rudzi rwevanhu, vakadzikinurwa kuburikidza Passion Jesu Kristu.
Ichokwadi kuti kutambura kwake kutifira haana kubviswa zvose kurwadziwa kubva hwedu. To Kwete, sezvo akanyora MuApostora Pauro ake Tsamba Phillipians (1:29), "It makapiwa imi nokuda kwaKristu kuti chete kutenda maari asi kuti mutambudzike nokuda kwake."
saka, mumiedzo yedu isu vakauya pedyo Kristu uye kuuya kunyange kugoverana pakubwinya kwake (ona aPauro Tsamba Yechipiri kuVaKorinde, 1:5). Zvikuru sei Jesu kuziva pamwe uyo anotambura kuti anorwara mupenyu mufananidzo Him. Mother Teresa akataura kakawanda kuti kuona zviso wokumubatsira mweya ivavo, vaakabereka wacho kubva maiiswa ose Calcutta, chaizvo chiso chaJesu.
saka, Passion Kristu haana kubviswa kutambura kwedu pachedu, asi shandurwai izvozvo. Sezvo Pope John Paul Mukuru akanyora,"In kwoMuchinjikwa waKristu kwete chete ndiye Redemption kuburikidza kutambura, asi kutambura kwevanhu pacharo akaregererwa " (kuchengetedza Passion 19).
Kutambura izvo Mwari anobvumira kuti apinde muupenyu hwedu, kana akauya pamwe matambudziko aKristu paMuchinjikwa, tora munhu rokudzikinura unhu uye angagoverwa Mwari ruponeso rwemweya. Zvedu, ndokubva, kutambura hakusi isina chinangwa; zvinoshamisa, zviri inzira yokuwana nyasha dzaMwari. Kurwadziwa mudziyo kuburikidza nawo Mwari anogona pave Kuchenurwa kwedu, nzira zvokunamata kuchekerera mumwe angati.
The Tsamba kuvaHebheru (5:8) rinotiudza Jesu, pachake,
"Akadzidza kuteerera kuburikidza chii zvaakatambura." Uye tsamba mberi, “Nokuti Ishe anoranga avo vaanoda, uye kutsiura mwanakomana umwe neumwe waanogamuchira. Kana muchitsunga pakurangwa, kuti iwe kutsungirira. Mwari anokubatai imi savanakomana; nekuti mwanakomana ndeupi baba vake vasingarangi? ... [Baba] anoranga nokuda kwedu zvakanaka isu, kuti tinogona kugoverana utsvene hwake. Nokuti nguva kurangwa zvose zvinoita kunorwadza pane zvinofadza; Papera kunobereka zvibereko zverugare zvakarurama kune vanorovedzwa mazviri.” (12:6-7, 10-11)
Kunzwisisa pfungwa rokudzikinura kutambura, Saint Pauro akareurura Tsamba yake kuvaKorose 1:24, "Munyama yangu I kupedza chii zvichiri kushayikwa maererano nokutambudzika kwaKristu, nokuda kwomuviri wake, kuti ndiye Church. "
Izvi hazvirevi, ehe saizvozvo, kuti Passion Kristu wakanga chero nzira kukwana. Chibayiro chake nokuda kwedu pachako kwakakwana zvakakwana uye efficacious. asi, tichitarisa Passion Rake, Jesu anodana isu tonotora redu muchinjikwa uye kumutevera; rokunyengeterera mumwe nomumwe, mukutevedzera Him, kuburikidza nemunamato uye kutambura (ona Luke 9:23 uye Pauro First Tsamba Timothy 2:1-3).
Saizvozvowo, yake Letter First (3:16), Saint John anonyora, "Neizvi tinoziva rudo, kuti upenyu hwake nokuda kwedu; uye tinofanira kuisa pasi redu hama upenyu. "
"Uyo anotenda mandiri, iyewo achaita mabasa andinoita,"Anodaro Jehovha; "Uye mabasa makuru pane aya achaita, nekuti ini ndinoenda kuna Baba " (John 14:12). saka, Jesu anoda Kupindura redu mubasa rokudzikinura kwete nekurovererwa asi nerudo, zvakafanana sei ndibaba vari anotarisa kusanganisira mwanakomana wake mumabasa ake. kureverera yedu mumwe, uyezve, unoswedera pamusoro yakasiyana uye woga Mediation kwaKristu naMwari (ona naPauro First Tsamba Timothy, zvakare, 2:5).
Kuti ave nechokwadi, zvose zvatinoita kunotsamira nezvaakaita uye zvaisazobvira kunze nayo. Sezvo Jesu akati muna Johane 15:5, "Ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Anogara mandiri, uye ini maari, ndiye unobereka zvibereko zvakawanda, nokuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. "Saka, Hazvina pachedu chido chedu kuti mutambudzike nokuda kwake uye naye kuti "kushaya,"Kushandisa naPauro izwi, vematambudziko aKristu.
Zvechokwadi kukokwa kuti basa rokudzikinura raKristu kupfurikidza kubatanidza kutambura kwedu kwake kuitira ruponeso rwedu, uye ruponeso vamwe nekunyaradzwa zvinoshamisa. Saint Therese pamusoro Lisieux akanyora:
“Munyika, pamusoro akamuka mangwanani Ndaimbofunga pamusoro chii kuti zvichida kuitika kana zvinofadza kana rinorwadza masikati; uye kana ini akafanoona chete kuedza zviitiko Ndikamuka dispirited. Zvino ndiwo zvikuru neimwe nzira: Ndinofunga kuti matambudziko uye kutambura kuti ini vanomirira, uye randichasimuka zvikuru inofadza uye azere ushingi zvikuru ini kufanoona mikana yokuratidza rudo rwangu Jesu ... . Ipapo wandichatsvoda pamuchinjikwa yangu vaiise zvinyoronyoro pamusoro pamutsago ini mapfekero, uye ndinoti kwaari: 'My Jesu, iwe aishanda zvakakwana uye vakachema zvakakwana munguva matatu-matatu makore oupenyu hwako pamusoro murombo pasi rino. zvino tora zororo yako. ... chijana My zviri kutambura uye kuti kurwa '” (Nokurangarira Reminisces).
Paakanga achitambura ari pamwe naShe Jesu netariro–kunyange vachiri rwadza–kutambura kunze kwake zvinovava uye chinhu.
Muzviitiko, hakuna ukoshi kutambura, uye nyika anomhanya kwazviri–vachitsvaka kudzivisa nayo zvodii–kana blames munhu kuti njodzi yake. Semuyenzaniso, vamwe ona marwadzo uye vanoda sezvo mirango hwaiitirwa naMwari pamusoro rusingatendi, kana kutambura uye pakupedzisira rufu kubva, vanoti, kenza yemapapu sezvo zvinounzwa pachedu kushaya kutenda. Saizvozvo, pane vanhu vanotenda kuti Mwari anoda kuti mutendi wose kurarama vakasununguka zvachose zvirwere; zviri munhu kusarudza kana kuti Kuva murombo chivi apo Mwari anopikira kubudirira.
The Bible, ehe saizvozvo, chose rinoramba nemaonero ichi chero kangani, kusanganisira Mharidzo of Mount mu Matthew 5, “Vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota kururamisira, nokuti vachagutiswa,” uye Luke 6:20, semuenzaniso, "Makaropafadzwa imi varombo ...,"Uye" nhamo imwi vakafuma " (Luke 6:24; cf.. Matthew 6:19-21; ari Tsamba James 2:5).
basa, uyo Bhaibheri rinorondedzera se "murume asina chaanopomerwa uye akarurama" (basa 2:3), akarwara, kufa kwevadiwa, uye kurasikirwa nezvinhu zvake.
The Virgin Mary, uyo akanga asina chivi (Luke 1:28), vakatambura kurambwa, pokugara, kutambudzwa, uye kurasikirwa Her Son- "munondo uchapinda nemweya wako zvakare,"Simeoni akanga azivisa yake (Luke 2:35).
Johane mubhabhatidzi, ari aizotangira kwaJesu, "Aipfeka nguvo engamera" uye akadya "mhashu nouchi" (Matthew 3:4). Timothy akatambura nomudumbu zvirwere (ona aPauro First Tsamba Timothy 5:23); uye Pauro aifanira kusiya ake co-worker, Trofimo, shure nokuda chirwere (ona naPauro Second Tsamba Timothy 4:20).
Uyezve, kana Saint Petro akaedza Jesu kusiya Passion, Jesu akapindura, "Ibva shure kwangu, Satani! Uri chigumburiso kwandiri; nokuti hamusi kudivi raMwari, asi varume " (Matthew 16:23).
In chokwadi, chero kuedza kuwana mbiri apo pavaigona kutora chikepe chaienda Muchinjikwa ndiwo nemadhimoni zvakasikwa (cf.. Tim Oklahoma, mashoko Fulton J. Sheen, "Mhinduro Catholic Urarame" redhiyo chirongwa [Kukadzi 24, 2004]; zvinowanikwa pana catholic.com).
Pedyo nomugumo woupenyu hwake, chete Peter, akanga kamwe atsiurwa naJesu zvokuda kuti tidzivise kutambura, vakazivisa kuti vakatendeka:
"Muizvi [nhaka yokudenga] iwe ufare, kunyange ikozvino kwechinguvana ungada miedzo yakasiyana-siyana, kuti kutenda kwenyu, kunokosha kupfuura goridhe iyo kunyange zvinoora ichiidzwa nemoto, anogona redound kuti nokurumbidzwa nokubwinya nokukudzwa pakuratidzwa kwaJesu Kristu. " (naPetro First Letter 1:6-7)
saka, Zvakakodzera It?
Kuti tipindure mubvunzo, tinogona kuenda Saint Pauro Tsamba yake kuvaRoma 8:18: "Ini funga kuti matambudziko enguva ino kuzodzosera haana kukodzera kuenzanisa nokubwinya kuchazoratidzwa kwatiri."
Panyaya, hatimbofaniri kuona mubayiro: kuti rimwe zuva, nenyasha dzaMwari, mumwe nomumwe wedu pano vachaona Ishe Jesu Kristu muUmambo Hwake; tarira luminous chiso chake; inzwi rake nengirozi; uye kutsvoda maoko ake matsvene uye tsoka, akakuvadzwa nokuda kwedu. Kusvikira zuva, tinogona kuzivisa kufanana Saint Francis wokuAssisi mu Nzira paMuchinjikwa, "We rumbidza You, O Kristu, uye tinorumbidza You, nokuti Your Holy Cross Makadzikunura nyika. Ameni. "